Peker, TCDD qaanuunka bedelka cinwaanka waa in laga saaraa wareysiga | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraPeker, TCDD Qorshaha wax ka beddelka wareysiga waa in laga saaraa
27 / 03 / 2017 06 Ankara, tareenka, GUUD, TURKEY
Peker, TCDD Sharciga isbeddelka Title waa in laga saaraa waraysiga: Udem HAK-SEN) Madaxweynaha Madaxweyne Ku-xigeenka ah ee UDEM HAK-SEN, Madaxa TCDD ee 22 Oktoobar 2016 wax ka beddelka shuruudaha baaritaanka afka (wareysiga).
Abdullah Peker, Guddoomiyaha UDEM HAK-SEN (Xuquuqda iyo Ururka Shaqaalaha iyo Tareenada), ayaa dalbaday in la tirtiro baadhitaanka afka (waraysiga) iyada oo wax laga bedelay 22 Oktoobar 2016 oo ku yaal xeerka beddelka TCDD.
Peker ayaa sheegay in xeerka dib loo eegay in uu jiro shuruudaha baaritaanka afka ka dib imtixaanka qoraalka ah ee Maamulaha Shirkadda iyo shaqaalaha heerkii maamulaha, iyo wixii ka dambeeya isbeddelka, shuruudaha baaritaanka afka waxaa lagu soo bandhigay cinwaanka iyo cinwaanada, iyo ficilkan, xubnaha ururada shaqaalaha xaq u leh ayaa loo tixgelin karaa.
DIB U GEYSANAYA MUSLLAHAH PEKERIN
Fikraddeena ka timid xukuumadeena waa in ay tirtirto caddaalad darrada sida ugu dhakhsaha badan sababtoo ah baaritaanka afka (wareysiga) oo la keenay October 22 si loo helo xeerka isbedelka.
Codsigii hore, kaliya maareeyaha latalinta iyo shaqaalaha heerka heerka maamul ee qawaaniinta khuseeya ka dib markii imtixaanka afka laga codsaday ka dib imtixaanka qoraalka ah iyo madaxa iyo hoosta cinwaanka in la sameeyo iyada oo la meeleynayo dhibcaha imtixaanka qoraalka ah ayaa saldhig u ah. Marka la eego isbeddelka, magaca madaxa iyo hoosta hawsha shaqada lagu dallacayo marka lagu daro imtixaanka qoraalka ah ee loogu talagalay magacaabida baaritaanka afka. Sidaa darteed, dhibcaha ugu sarreeya iyo dhibcaha ugu sarreeya ee imtixaanka qoraalka ah ayaa loo qaadayaa imtixaanka afka. Shuruudaha dhibcaha ee imtixaanka qoraalka ah ayaa sidoo kale laga jaray 70 ilaa 60. Meeleynta waxaa lagu sameyn doonaa iyadoo la qaadanayo celceliska imtixaanka qoraalka ah iyo afka. Isbeddel kale wuxuu ku jiray imtixaanka isbeddelka. Marka laga reebo imtixaanka qoraalka ah, shuruudaha baaritaanka afka waxaa loo soo bandhigey cadeylka loo magacabay isbeddelka cinwaanka.
Xaaladdan, kormeerayaasha qaarkood waxay u shaqeyn karaan sidii qayb ka mid ah xubno ka mid ah urur shaqaale ama mid u dhow. Xaaladdan oo kale, wax walba waa laga ruxi doonaa dhulka, gaar ahaan qaybta dadweynaha. Sababtoo ah waxba ma socon karaan si habboon marka ay jiraan caddaalad darro. Xaaladdan, shaqaalaha rayidka ahi shaqo kuma qabtaan iyagoo faraxsan, kamana yeelan karo wax rajo mustaqbal ah. Iyadoo aan laga maarmin, dadweynaha lama filayo inay horumar sameeyaan oo horumariyaan. Sidaas darteed, waxaa laga yaabaa in ay suurtogal tahay caddaalad weyn oo xoog badan ee Turkey, laakiin dadweynaha. Waa in aan tixgelinnaa caddaaladda qaybta dadweynaha iyada oo ah meesha ugu muhiimsan ee wax kasta oo ka mida maamulka waddanka. Haddii aan rabno inaan xaqiijino in dadku ku kalsoon yihiin gobolka, waa in aan xaqiijinnaa caddaaladda dadwaynaha iyo horumarinta fahamka xaqiiqda dhabta ah iyo shuruudaha.
Xalinta dhibaatada, shuruudaha baaritaanka afka waa in la tirtiro ama fasalada lagu bixiyo baaritaanka afka waa in laga saaraa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ee ku saabsan shuruucda isbeddelka iyo isbeddelka; Waa in ay xadidan tahay in aan ka badneyn dhibka ugu sareeya ee 5 fasalka laga qaaday imtixaanka qoraalka ah, sida xaddidaadda dhibcaha imtixaanka afka ee qorista macalinka ee dadweynaha.
Waxaan rajeynayaa in xukuumaddeenu ay saxeexi doonto arrintan iyada oo la raacayo nidaam deg-deg ah inta lagu jiro habsocodka aftida.
Peker: TUDEMSAS ma joojineyso isticmaalka daroogada